Isabelomali Esithe xaxa I-5x10m PE Indawo Yamatende YeTende neGreenhouse | I-Winsom
Iziqephu ze-10-16 Izingcezu ezingama-30-49 > = Izingu-50
Inombolo Model WS-P1510
Igama lento Ibhajethi ye-5x10m PE Izinkundla zemicimbi
Usayizi Womkhiqizo I-16x32ft (5x10m)
16x32ft (5x10m) Umdwebo ojwayelekile
Ukuyisebenzisa ephathini yakho elandelayo, emshadweni noma kwi-BBQ ukuze uguqule noma ikuphi ukulungiselelwa kube umcimbi oyingqayizivele! Guqula umbuthano ojwayelekile ungene kokungjwayelekile ngetende lephathi elijabulisayo nelisebenzayo.
Uphahla lendwangu oluqinile, olungavikeleki lwamanzi i-Pe kanye nezindonga eziseceleni kuvumela ukuhlanzeka okulula futhi kugcina izinto zesimo sezulu esibuhlungu zingahambi.
Idizayini yomphetho we-wavy ikunika enye inketho. Isembozo esingaphezu komgwaqo esizungeze eceleni kwendlela senza itende lingene emoyeni futhi livikeleke, kusetshenziswa isitini, i-sandbag noma ezinye izinsimbi ezizungeze izinhlangothi ukuqinisa ukuqina.
Inomnyango ongasuswa, ongena ku-zippered namafasitela we-PE ukuvumela umoya omningi nokukhanya ngaphakathi. Ungasakaza isisulu esigoqayo ukuvala umnyango isikhala esiseduze.
Isakhiwo esingunxantathu esiyingqayizivele, okwenza uphahla oluphezulu luzinze kakhulu futhi luqine. Ukukhetha okuhle kwephathi yakho nemisebenzi yemicimbi yangaphandle yegumbi layo elibanzi.
Leli tende elikhulu lephathi elikhulu lifaka ifreyimu yensimbi eyenziwe yabekelwa amandla amakhulu nokugqwala. We Sebenzisa izinkinobho zentwasahlobo kanye nonyawo lwensimbi nesikhonkwane okwenza itende lihlale liqinile, linempilo futhi liqinile. Ama-tarps amhlophe anikeze izimbobo kusengaphambili ukunamathisela intambo bungee ngokusebenzisa futhi baqiniswa grommets ukuvimbela tarp kusuka ukuqhuma. Izintambo ezihlanganisiwe zilula ukugoqa ngokusebenzisa izimbobo bese zilula izingongolo zensimbi ukuze zivikeleke.
Esedlule: I-Canopy Car ephathekayo ephathekayo engangenwa ngamanzi i-10'x20 ′
Olandelayo: I-Walk-in Tunnel Plastic Greenhouse yezoLimo 3x6m